Ungayithintela njani ipropaganda yonyulo ekufikeleleni kwibhokisi yakho yeposi | Iindaba zeGajethi
Ungayithintela njani ipropaganda yonyulo ekufikeleleni kwibhokisi yakho yeposi
Unyulo lwalo nyaka we-2019 lusondela eSpain, ukuguqulwa koMthetho woNyulo ngo-2018 kwenza ukuba inkqubo evumela abemi ababhaliswe kwiZiko leSizwe leeNkcukacha-manani ukuba bafikelele kwidatha yabo kwaye bamisele ukurhoxiswa kokuthunyelwa kwe-propaganda yonyulo. Ngokusasaza ubunyani sibhekisa kwiileta ezithunyelwa ngamaqela ezopolitiko kubavoti ababhalisileyo nezindululo zabo kunye namaphepha okuvota. Sikufundisa ukuba ungabhalisi njani ukuze ungathunyelwa ipropaganda yonyulo evela kumaqela kulonyulo jikelele. Ngokukhawuleza nangokulula unokukunqanda ukusetyenziswa gwenxa kwephepha kunye neplastiki, ukonga okubalulekileyo kwiplanethi kunye namanyathelo ngokuchasene notshintsho lwemozulu.
1 Yintoni ipropaganda yonyulo?
2 Ngaba kusemthethweni ukuba bandithumelele ipropaganda yonyulo ngaphandle kokuyicela?
3 Yintoni oyifunayo ukuba urhoxise ipropaganda yonyulo
4 Ungayikhupha njani inkqubo ye-propaganda yonyulo
5 Nceda okusingqongileyo ngeli nyathelo
Yintoni ipropaganda yonyulo?
Amaqela ezopolitiko ahlala eqala amaphulo okunyusa ivoti kwiinyanga ezimbalwa phambi konyulo, nangona kunjalo, kude kube lixesha nje elincinci ngaphambi kokuba kuvotwe ngokusemthethweni ukuba baqale ukuthumela "ipropaganda yonyulo" kumakhaya abo babhalisiweyo.. Amaqela ezopolitiko abangelwa ngumthetho ukukwazi ukufikelela kwi-National Institute of Statistics, oyena mntu uphetheyo ukuthatha ubalo lwabemi bonke kunye nokumisela, phakathi kwezinye izinto, indawo abahlala kuyo. Ke ngoko, le propaganda yolonyulo ithunyelwa kwidilesi ebonakalayo kwi-INE.
Ngokukhawuleza nje ukuba umntu othatha ubalo lwabantu ufikelela kwiminyaka yobudala yesininzi kwaye unamandla okuvota, kwaye Nje ukuba kubalwe abantu boNyulo kwaye kusekwe ukuba ngubani onokuvota kwaye kufuneka bavote phi, iposi ye-propaganda yonyulo iyaqala ukufika. Le imeyile yeposi ayihlukanga kuyo nayiphi na enye iposi yoluntu, ngaphandle kokuba amaqela ezopolitiko anokufikelela kwiinkcukacha zethu ngaphandle kwesidingo sokuba sinike imvume yethu. Inomdla, kuba oku kuyaphikisana noMthetho woKhuselo lweDatha, nangona kunjalo, yinto eguqukayo yokuba abanye abemi balunge, ngenxa yokuba banokuvota ngokuthe ngqo emakhaya.
Ngaba kusemthethweni ukuba bandithumelele ipropaganda yonyulo ngaphandle kokuyicela?
Enye yeempawu ezisasazwayo kunyulo kukuba isiza kuthi nokuba zithini na iinjongo zethu zopolitiko, oko kukuthi, sifumana kwiibhokisi zethu zeposi iincwadana ezivela kuninzi lwamaqela ame kunyulo, ngaphandle kwezizathu zethu zezopolitiko okanye ezabo. Nangona kunjalo, Ukuphendula kwizikhalazo zemibutho ethile, kwi2018 iziseko eziyimfuneko zalungiswa ukuze zikwazi ukunqanda olu hlobo lwentengiso, Ukuzikhusela kumalungelo okufikelela kunye nokulungiswa kwedatha yethu.
Nokuba kungayintoni na, ipropaganda yonyulo ngeposi ngeposi iyavunyelwa kungabikho mvume ivela kummi, oko kukuthi, amaqela ezopolitiko awanakho ukusebenzisa iindlela zedijithali ezinje ngeSMS kunye ne-imeyile ukwenza imisebenzi yosasazo lonyulo., Ngaphandle kokuba ummi unike imvume yabo ngokucacileyo nangokungathandabuzekiyo, phantsi kweemeko ezifanayo njengalo naluphi na olunye uhlobo lwenkqubo yokuqhutywa kwedatha. Ngamafutshane, ipropaganda yonyulo eposini kuphela kwento efuna ungenelelo lwabemi ukuba luthintelwe.
Yintoni oyifunayo ukuba urhoxise ipropaganda yonyulo
Into yokuqala ekufuneka siqiniseke ngayo kukuba sinezixhobo eziyimfuneko zokungabhalisi kwinkqubo yezonyulo ngeposi ngeposi kunye neZiko leLizwe lezibalo. Kuyimfuneko ebalulekileyo yokwenza lo msebenzi ngeOfisi yeKhompyutha yeli ziko, Kwaye oku kuyakufuneka ubuncinci esinye kwezi zixhobo zimbini zokuqinisekisa
Isatifikethi seDigital okanye iDNIe
Nje ukuba siqiniseke ukuba singangqinisisa esinye sezi zixhobo zidumileyo, siya kuqinisekisa ukuba siyayenza inkqubo ngezixhobo eziyimfuneko zekhompyuter. Ezi zatifikethi ziyahambelana neenkqubo ezininzi zokusebenza, nangona kufuneka uqwalaselo olusetyenziswayo ikhompyuter eneWindows 7 ukubheka phambili kunye nesikhangeli sewebhu seInternet Explorer. Ngale ndlela siqinisekisa ukuba sinokuhambelana okuphezulu, nangona kunjalo, sikwazile ukuqinisekisa ukuba isebenza ngokuchanekileyo kwi-macOS kunye nakwiMozilla Firefox kunye neGoogle Chrome njengezinye izikhangeli. Ngoku ekubeni siqinisekisile ukuba sinakho okufunekayo ukuze sikwazi ukwenza umsebenzi wokungabhalisi kwinkqubo yepropaganda yonyulo, kufuneka sithathe amanyathelo alandelayo.
Ungayikhupha njani inkqubo ye-propaganda yonyulo
Landela la manyathelo alula endikushiye kuwo emva koko:
Singena kwiwebhusayithi yeNational Institute of Statistics (LINK)
Nje ukuba ngaphakathi, phezulu sikhetha imenyu "Ubalo lwabantu bolonyulo"
Ngoku nqakraza kwi "Ukubonisana kwedatha yobhaliso kuBalo loNyulo"
Imenyu yoBalo yoNyulo iya kuvulwa, phezulu sishiya imouse ngaphezulu Inkqubo> Inkqubo yoBalo-bantu> Ukukhutshelwa ngaphandle kwiikopi zepropaganda
Xa sicofa olu khetho, imenyu ehambelana nayo iya kuvula ukuze siqale iseshoni ngokuqinisekiswa kuthetha ukuba besikhe sachaza ngaphambili (i-DNIe -Isiqinisekiso seDigital- Cl @ ve). Kulapho ikopi yesicelo iya kuvulwa khona kwaye kufuneka sicofe kwiqhosha elingezantsi elinophawu «Thumela usetyenziso». Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, iZiko leSizwe leeNkcukacha-manani liza kurekhoda ukwala kwethu ukuvumela idatha yethu yoBalo loNyulo ukuba ibe yinxalenye yeekopi ezithunyelwe kumaqela ezopolitiko ngenjongo yokuthumela i-imeyile yezopolitiko. Ngale ndlela ilula siya kuthi sithintele ngokulula naluphi na uhlobo lwentengiso yonyulo ekufikeleleni ekhayeni lethu.
Nceda okusingqongileyo ngeli nyathelo
Ngaphezulu kwe-370 yezigidi zeepropaganda ezithunyelwa kubemi kwaye malunga ne-60 yezigidi zeemvulophu ziyafumaneka kwizikhululo zokuvota. Ezi voti zenziwe ngeplastiki kunye nezinto zephepha azenzi ngqondo ngexesha lonxibelelwano kunye nehlabathi ledijithali, ukwala ipropaganda yonyulo yindlela entle yokuphepha ukungcolisa, kwaye kukho izinto ezininzi eziyimfuneko xa uninzi lwezovoti lungavelisi mdla wokwenyani kwaye Baphela nje emgqomeni wokurisayikilisha, okona kulungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayithintela njani ipropaganda yonyulo ekufikeleleni kwibhokisi yakho yeposi
INonos One SL entsha, isithethi ngaphandle kwemakrofoni, ngoku ziyafumaneka ngee-euro ezingama-199